လူ့ဘ၀ဆိုတာ ရခဲတဲ့ ဘ၀တစ်ခုပါ။ အခြေခံအထည်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ လူ့ဘ၀ကိုယ်တိုင်ကိုက ရခဲနေမှတော့ လူ့ဘ၀ ရောက်နေတဲ့သူတွေပဲ ခံယူခွင့်ရှိတဲ့ ရဟန်းဘ၀ဆိုတာကတော့ ပိုပြီး ရခဲသွားပြီပေါ့။ ``အခက်ထဲက အခက်၊ အကောင်းထဲက အကောင်း´´ လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပါ။ဒါမှမဟုတ် ``အခက်တကာ့ ထိပ်ခေါင်´´ လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပါ။
ရခဲတဲ့လူ့ဘ၀ကို ရလာသူတိုင်း ပိုရခဲတဲ့ ရဟန်းဘ၀ကို မရနိုင်ကြပါဘူး။ ရဟန်းဘ၀ ရထိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ပါရမီ ပါတဲ့လူတွေပဲ `၀တ်ကြောင်လူ့ဘ၀´ထက် ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ `ရဟန်းလူ့ဘ၀´ ကို ၊ `ရိုးရိုး လူ့ဘ၀´ထက် ပိုအထက်တန်းကျတဲ့ `အထူးလူ့ဘ၀´ ကိုရနိုင်ကြပါတယ်။
ဟိုလူပြော ဟုတ်နိုးနိုး၊ ဒီလူပြော ဟုတ်နိုးနိုးမဖြစ်ရလေအောင်။
ဘုန်းကြီးကပြောတယ်၊ “ ကိုယ်တော်တို့ စာမသင်ဘဲ နေလို့တော့ မရဘူး၊ စာမသင်လို့
ရှိရင် မတည်မြဲဘူး၊ ဟိုလူပြော ဟုတ်နိုးနိုး၊ ဒီလူပြော ဟုတ်နိုးနိုး၊ တရားတင် အားထုတ်လို့ ရှိ
ရင် ကိုယ်တွေ့တာလေးတင် အဟုတ်ထင်မှာ” ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတွေ့ဆိုတာ
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 9:37 PM No comments:
အကျိုးရှိရဲ့လား (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)
လူတွေထင်တာက ဥာဏ်ရှိတဲ့ လူတွေပဲ တစ်ခုခု လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အကျိူးရှိတာပဲ လုပ်မှာပေ့ါလို့ ဒီလိုထင်တယ်။ လူတွေဟာ ဥာဏ်ရှိတဲ့ သတ္တဝါ ဖြစ်တာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်အလိုလိုက်၊ လောဘ အလိုလိုက် ပြီးတော့ အကျိုးမရှိတာတွေ အများကြီး လုပ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘဝရဲ့ အရည်အသွေး နဲ့ အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုကို လိုလားတဲ့ သူ၊ တရား အားထုတ်မယ့် သူဆိုရင် ဘယ်အလုပ် လုပ်လုပ် အကျိုးရှိ မရှိ ဆိုတာကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစား သင့်တယ်။
ဥပုသ်သီလယူမည့်သူ အလှပြင်သင့် မသင့်...?
ရှစ်ပါးသီလထဲမှာ ပန်းပန်ခြင်း၊ နံ့သာ
လ်ိမ်းခြင်း ၊ မပြုရလို့ ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
ဟုတ်ပါတယ်။ သီလမယူခင် လ်ိမ်းထား
ကြတာမို့လို့ အပြစ်တော့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါ
ပေမဲ့မေးပါရစေ ။ သီလယူပြီးရင်ကော
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ရှင်ဥပါလိမထေရ်ကို ဟောကြားခဲ့သော ဓမ္မမှတ်ကျောက်။
ရှင်ဥပါလိမထေရ်ကို ဟောကြားပေးခဲ့တဲ့ ဓမ္မမှတ်ကျောက် တစ်ခုကတော့ =
၁။ ဧကန္တနိဗ္ဗိဒါယ။ ။ သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာ သာယာစရာဆိုတာ မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ သံသ
ရာဝဋ်ဆင်းရဲကြီးကို ငြီးငွေ့လာမယ်။ ငြီးငွေ့မှုကို မဖြစ်စေဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကျင့်နေ
ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည်မွန် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးတော်မူနေစဉ်အခါ၌ ကျောင်းဒါယကာကြီး အနာထပိဏ် သူဌေးအား အလှူဒါနနှင့် ပတ်သက်၍ ဝေလာမသုတ်တရားတော်ကို မိန်.တော်မူသည်။
၁။ ဝေလာမသုတ်တရားတော် အကျဉ်းချုပ်ကား … ရှေးအခါက ဝေလာမအမည်ရှိ ပုဏ္ဏားသူဌေးကြီးသည် မဟာဒါနအလှူတော်ကို ပေးလှူ၏။ ယင်းအလှူ၌ ငွေဒင်္ဂါး အပြည့်ပါသော ရွှေခွက်ကြီး ရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ ရွှေဒင်္ဂါး အပြည့်ပါသော ငွေခွက်ကြီးပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် စသည်ဖြင့် ရှစ်သောင်းလေးထောင်ပေါင်း များစွာသော ရတနာ ခုနှစ်ပါး ဆင်မြင်းကျွဲနွား၊ အဝတ်အထည် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းအစုံပေါင်း များစွာကို ပေးလှူသည်။ အလှူတော်ကြီးသည်ကား မြစ်ရေအလျင်ကြီး တရဟောစီးသကဲ့သို. အကြီးအကျယ်လှူခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
တရားဆိုတာက နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်း ကျင့်လို့ရပါတယ်။ ကမ္မဌာန်းထိုင်နေမှ တရား
ကျင့်တာမဟုတ်ပါ။ တရားဆိုတာ ဣရိယာပုတ် လေးပါးစလုံးနဲ့ ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
အညစ်အကြေးတွေကို သန့်ရှင်းအောင်လုပ်တာဟာ တရားပါပဲ။ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတယ်လို့
အော်.. ပါးစပ်.. ပါးစပ်..။ တော်တော် ထိန်းရခက်တဲ့ ပါးစပ်ပါပဲ။ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ဆုံးမသြ၀ါဒ ပေးခဲ့ပါတယ်..။ လူတွေကို အကုသိုလ်အပေးဆုံးဟာ စိတ်ပြီးရင် နှုတ်ဆိုတဲ ပါးစပ်ပါပဲတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်နော်..။ မုန်းစေချင်ရင်လည်း ဒီပါးစပ်.. ချစ်စေချင်ရင်လည်း ဒီပါးစပ်ပါပဲ..။
ဆဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆက မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဩ၀ါဒဆောင်ပုဒ်များ(၁)။
ရုပ် နာမ် နှစ်မျိုး၊ ကြောင်းကျိုးသိမြင်၊
ဤနေရာ၌ဥပုသ်စောင့်ထိန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူသော အဆုံးအမကို တင်ပြလိုပါသည်။ ဤအဆုံးအမသည် ဝိသာခါကျောင်းအမကြီးအား ဟောကြားဆုံးမသော အဆုံးအမဖြစ်သည်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 3:00 PM No comments:
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်အထင်ကြီးပြီးတော့ သူများကို အထင်မသေးပါနဲ့။
ကိုယ်အထင်သေးထားတဲ့သူက ကိုယ်အထင်သေးသလို ဟုတ်ချင်မှာလည်း ဟုတ်မှာပါ။
အခုလောလောဆယ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့အထင်သေးစရာ ဖြစ်နေပေမယ့်
တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ထက်သာချင် သာသွားမှာပဲ။
ကိုယ်အထင်ကြီးစရာ အနေအထားမျိုးရောက်ချင် ရောက်သွားမှာပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီး သူများကို အထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ မပြောသင့်
မပြောထိုက်တာ ပြော၊ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တာ လုပ်မိရင်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:39 AM No comments:
ဟိုလူပြော ဟုတ်နိုးနိုး၊ ဒီလူပြော ဟုတ်နိုးနိုးမဖြစ်...
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ရှင်ဥပါလိမထေရ်ကို ဟောကြားခဲ့သော ဓမ္မမှ...